MY REMEMBRANCE: နောက် ငါးနှစ်နှင့် ရိုက်လွှတ်လိမ့်မယ်
Posted by puluque at Wednesday, December 30, 2009
ကိုယ်ကတော့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကို အရမ်း ဂရုစိုက်တယ်။ လူပြိုကြီးလားလို့ပဲ လာမေးမယ်။
ဒါ ပါးပါးလေးနဲ့ ကြွားသွားတာပဲ...
ကြွားတာတွေ များနေပြီ...း))
ဟုတ်တယ် မမသက်ဝေရေ..ပုလုက ပါးပါးလေးကြွားသွားတာ ..း)))
လူပျိုကြီး တကယ်လုပ်မှာလား..ပြောစမ်းကွယ်...တကယ်လို့ တရုပ်မလေးနဲ့မှ မပေါင်းရရင်တော့ ....
လူပိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်...း)))
ဘာလို့သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်နေရတာတုန်း အခုအထိ..
နှစ်တွေလည်းကြာပေါ့ ပုလုရယ်..သူငယ်ချင်းမလေးလည်း စိတ်နာလောက်ရောပေါ့..မပြောလဲနေတော့ မင့်ထက်သာတာရှာယူမယ် ဆိုရင်
တော့ ပုလုတို့နာပြီသာမှတ်.း)
နောက် ၅နှစ်လောက်နဲ့တော့ ဗိုက်ပူပူ ကွမ်းတပျစ်ပျစ်ထွေးနေတဲ့လူကြီး မဖြစ်လောက်သေးဘူးထင်တာပဲ..
လူပျိုကြီးကတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်.း))
အိုကေ .. ပုလုရည်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နိုင်စေ.
လူပျိုကြီးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်..ရေးပေးတာကျေးဇူးပါ ပုလုရေ..
တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ ပုလု ...
ပုပုလုလုရေ....ဟုတ်ပါ့မလား မောင်ကာလုရဲ့ လို့ ရွှေမန်းတင်မောင် လေသံနဲ့ မေးလိုက်ချင်သေးဗျား....:D
နောက် ၅ နှစ်မှာ လူပျိုကြီးပဲ ဆိုတာ ယုံဘူးဗျို့....ရွာသား ဆိုရင်တော့ ယုံလိုက်ဦးမယ်....သူက အရိုးများ ချေးခါး အတော် ရွေးသကိုး...:)
ဒါကတော့ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်...။ အဲဒီနေ့ က လဘက်ပွဲတွေ ချကျွေးဖို့ မေ့၊ အမ ဗုဒ္ဓဂါယာ က ဝယ်လာတဲ့ ဘုရားပုံတော်လေးတွေ အားလုံးကို လက်ဆောင် ပေးဖို့ဟာလဲမေ့၊ ဖုန်းနံပါတ် ယူထား ဖို့လဲမေ့၊ ပြောချင်ဘူးဟယ်၊ စားဖို့ကတော့ မပူနဲ့ မတ်လ ထဲမှာ အိမ်မှာ သဒ္ဒါဆွမ်း ကပ်အုံးမှာ...၊ ထမင်းနဲ့ ဗမာဟင်းကောင်းကောင်း ချက်မလားလို့....။
ဆီဂျီးတပေပေ၊ ဗိုက်ပူပူ ကွမ်းတံတွေး တပျစ်ပျစ်နဲ့ လူကြီးကိုတွေ့မှတော့ လူပျိုကြီးလားလို့ မေးတော့မလား။ အိမ်ထောင်ပဲ ကျနေလို့ ဗိုက်ထွက်လာတာ မဟုတ်လား။ ဒီဗိုက် ဒီဗိုက်... အဟက်
လူပျိုကြီး တကယ်လုပ်မှာလား ပြောစမ်းပါ ရည်ရွယ်တဲ့ မင်းအကြောင်းတွေ...
အဲ့သီချင်းလေးကို တရုတ်မလေးက ဆိုနေပြီတဲ့
ကိုပုလုရေ... မိန်းကလေးမို့ မိန်းကလေးခံစားချက်ကို သိတယ်... ပြောမှာဖြင့်လဲဖွင့်ပြောလိုက်... တော်ကြာ သူကလဲ အစ်ကို့ကို ချစ်ပါရက် အစ်ကိုဖွင့်မပြောလို့ တခြားသူကို လက်ခံလိုက်မှ ဘာမှ ပြန်ပြင်လို့မရပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်... ကိုပုလုလဲ ဖွင့်ပြောမှ သူကချစ်တယ်ဆိုလဲ ပျော်စရာ... မချစ်ဖူးဆိုလဲ ဒုတ်ရင်းပေါ့... ဘာဖြစ်တာလိုက်လို့... သဲသဲကွဲကွဲသိတာက တအုံးနွေးနွေးထက် များကြီးသာတယ်...
အမေ့ဆန္ဒလေး ပြည့်ဝနိုင်အောင် တရုတ်မလေးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆုံနိုင်ပါစေ ပုလုရေ... စာရေးကိရိယာဆိုင်ဖွင့်ရင်တော့ ရှေ့ဆုံးကကို လာအားပေးမှာ (အဲလိုဆိုင်ဆို မဝယ်လဲ နေ့တိုင်း မရိုးနိုင်ဘဲ လှည့်ပတ်ပြီး ကြည့်တတ်လွန်းလို့ ရိုက်တော့ မထုတ်နဲ့ပေါ့း) နောင်ငါးနှစ်နေလို့ “ရန်ကုန်မြို့ကနေ မိုင် ၆၀၊ ၃ဖာလုံဝေးတဲ့အရပ် လော်လီကားကြီးတွေ အောက်မှာ ဆီဂျီးတပေပေ၊ ဗိုက်ပူပူ ကွမ်းတံတွေး တပျစ်ပျစ်နဲ့” အနားမှာ သားသားမီးမီးလေးတွေ ပြေးဆော့နေတဲ့ လူကြီးကိုတွေ့ရင် “ဟေး ပုလု” လို့ နှုတ်ဆက်မယ်။ လဖက်ရည်တိုက်ဖို့သာ မမေ့နဲ့း)
ပုလုကွေးဆိုလို့ သေးသေးထင်နေတာ လက်စသတ်တော့ ဗိုက်ရွဲရွဲကြီးကိုးး)